Posted by kaung at Sunday, May 20, 2012 No comments:
Posted by kaung at Wednesday, February 29, 2012 No comments:
၁၉.၂.၂၀၁၂ရက်စွဲပါ နိုင်ငံတော်ပိုင် သတင်းစာများ၌ပါရှိသောဦးဂမ္ဘီရသတင်းနှင့်ပက်သကဦးဂမ္ဘီရသတင်းနှင့်ပတ်သက်၍
အရှင်ဝီရသူ၏ သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်။ (၂၀.၂.၂၀၁၂) ၁၃၇၃-ခု၊ တပိုတွဲလဆုတ်(၁၃)ရက်။
(က) ဦးဂမ္ဘီရသည် သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းများ ချမှတ်ထားသော ကျင့်ဝတ်ဥပဒေ များကို လျစ်လျူရှုခဲ့ပါသည်။
တရားဝင်လျှောက်ထားတင်ပြ၍ ခွင့်ပြုချက်ကို ရယူနိုင်ပါလျက် ဥပဒေမဲ့ ပြုမူခဲ့ပါသည်။ သင်္ကန်းပြန်ဝတ် သည်ကို နားလည်ပေးနိုင်သော်လည်း ချိပ်ပိတ်ထားသည့် ကျောင်းများကို သော့ဖျက်ဝင်ရောက်ခြင်းသည် ဘုရားသားတော်တို့၏ အပြုအမူ မဟုတ်သလို၊ ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းလည်း မကျပါ။ ဒီမ်ိုကရေစီကို လိုလားသူ၊ ဒီမိုကရေစီကို ချစ်မြတ်နိုးသူတိုင်းသည် ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းကျ ဆောင်ရွက်ဖို့ လွန်စွာလိုအပ်ပါသည်။ မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်စွာ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်မျိုးကို ရှောင်ကြဉ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
သုံးကြိမ်တိုင် စာဆင့်ခေါ်ပါလျက် ရုံးတော်သို့ မသွားရောက်ခြင်းသည် သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းကို မလေးစားရာ ကျသလို မထီမဲ့မြင်ပြုမူရာလည်း ရောက်ပါသည်။ တာဝန်မကျေသည့် မိဘပင်ဖြစ်သော်လည်း သားသမီးဟူသည် မိဘခေါ်လျှင် လာရမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
ပို၍ဆိုးသည်မှာ-နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကဆရာတော်ကြီးများက အနူးအညွတ် မေတ္တာရပ် ခံပါလျက် “မိမိလိုသံဃာတစ်ပါးအတွက် လိုအပ်မည်မထင်ကြောင်းနှင့် သင်္ကန်းဝတ်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားသွား မည်မဟုတ်ကြောင်း’’တင်းခံငြင်းဆန်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ငြင်းဆန်ခြင်းဖြင့် ဦးဂမ္ဘီရသည် စစ်အာဏာရှင်နည်းတူ ဥပဒေအထက်သို့ ရောက်ရှိသွားပါတော့သည်။
(ခ) ဦးဂမ္ဘီရ လျှောက်ထားသည့် အချက်(၁၀)ချက်ပါ လျှောက်ထားချက်ကို လျှောက်ထားခွင့်ပြုသည့် နိုင်ငံတော်သံဃာ့မဟာနာယက ဆရာတော်ကြီးများအား လေးစားကြည့်ညိုမိပါသည်။
ဦးဂမ္ဘီရ လျှောက်ထားသည့် အချက်များတွင် ရွှေည၀ါဆရာတော် ဦးပညာသီဟအား သာဓုဗုဒ္ဓ တက္ကသိုလ်ကျောင်းတိုက်မှ တစ်လအတွင်းထွက်ခွာရန် နှင်ထုတ်ခြင်းကို ကန့်ကွက်ကြောင်း၊ အကျဉ်းသား(၄၁၅)ဦးတွင် ပါဝင်သော ရဟန်း(၄၃)ပါးအား အကျဉ်းထောင်မှလွတ်မြောက်ရန် နိုင်ငံတော်သံဃာ့ မဟာနာယကက ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိသဖြင့် အလေးနက်ရှုတ်ချကြာင်းတို့ ပါဝင်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ကန့်ကွက်ထိုက်သည်ကိုကန့်ကွက်ခြင်း၊ရှုတ်ချထိုက်သည်ကို ရှုတ်ချခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် ဦးဂမ္ဘီရ၏ လျှောက်ထားချက် အပြည့်အ၀ မှန်ကန်ပါသည်။ မြတ်စွာဘုရားက “ချစ်သားတို့ ငါဘုရားမှာ အပြစ်ရှိ လျှင်လည်းထောက်ပြကြ’’ ဟုမိန့်တော်မူဖူးပါသည်။ ဟန္ဒ ဒါနိ ဘိက္ခဝေ ပ၀ါရေမိ ဝေါ နစမေ ကိဉ္စိ ဂရဟထ ကာယိကံ ၀ါ ၀ါစသိကံ ၀ါ ။ (သဂါထာဝဂ္ဂ ပါဠိ၊ ပ၀ါရဏာသုတ်) “ရဟန်းတို့ ယခုအခါ၌ ငါဘုရားသည် သင်တို့အား ဖိတ်ကြား၏။ ငါ၏ တစ်စုံတစ်ခုသော ကိုယ်အမူရာ နှုတ်အမူရာကို သင်တို့မကဲ့ရဲ့ဘဲ ရှိကြ ကုန်၏လော။’’ (၎င်းသုတ်မြန်မာပြန်)
န စ ကိဉ္စီတိ ပုစ္ဆနတ္ထေ နကာရော။ ကိံ မေ ကိဉ္စိ ဂရဟထ?
ယဒိ ဂရဟထ, ၀ဒထ, ဣစ္ဆာပေမိ ဝေါ ၀တ္တုန္တိ အတ္ထော။ (၎င်း၊ဋ္ဌ။၂၅၃)
ရွှေည၀ါဆရာတော်အား နှင်ဒဏ်ပေးခြင်းသည် ပြစ်မှု့နှင့်၊ပြစ်ဒဏ် လုံးဝမမျှတသည့် အမိန့် အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ အကျဉ်းကျသံဃာများနှင့်ပတ်သက်၍ သံယာ့မဟာနာယက အဖွဲ့စည်းအဆင့်ဆင့်က သက်သာအောင်၊ လွတ်မြောက်အောင်၊ ဘာတစ်ခုမျှ ဆောင်ရွက်ချက်မရှိပါ။ ဖမ်းဖို့သာ လုပ်တတ်ပြီး၊ လွတ်ရေးကို လုံးဝ စိတ်မ၀င်စားသည့် စစ်အာဏာရှင်အကျင့်ဆိုးကြီးကို အမွေခံကျင့်သုံးနေသည့် လက်နက်မကိုင်သည့် အာဏာရှင် အဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်နေသည်မှာလည်း အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဦးဂမ္ဘီရ၏ ကန့်ကွက်ခြင်း၊ အလေးအနက်ရှုတ်ချချင်းကို အပြည့်အ၀ ထောက်ခံကြောင်း အတိအလင်း ကြေငြာ ပါသည်။ သို့သော် ဦးဂမ္ဘီရသည် ဂုဏ၀ုဍ္ဎိ၊ ၀ယ၀ုဍ္ဎိဂုဏ်ကို မလေးစားမလိုက်နာဘဲ ထေရ်ကြီးဝါကြီး ဆရာတော်ကြီးများအား နိုင်ငံရေးအရ ထိုးနှက်နှိပ်နယ်သည့် သဘောသက်ရောက်သွားပါသည်။ ဓမ္မကို မြတ်နိုးသူဖြစ်လျှင် မေတ္တာရပ်ခံ တောင်းပန်လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ - ရွှေည၀ါဆရာတော် အပေါ် ချမှတ်ထားသော ပြစ်ဒဏ်ကို ပြန်လည် စဉ်းစားသုံးသပ်၍ လျှော့ပေါ့ပေးစေလိုပါသည်ဘုရား။ (၀ါ)လျှော့ပေါ့ပေးပါရန် အနူးအညွတ် မေတ္တာရပ်ခံ တောင်းပန်လျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရား-ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
ကန့်ကွက်ခြင်း၊ ရှုတ်ချခြင်းဝေါဟာရများသည် နိုင်ငံရေးလောက၌ တွင်ကျယ်နေသော ဝေါဟာရများ ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံရေးလုပ်လိုက မီဒီယာများမှ တစ်ဆင့် ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။ ရှုတ်ချနိုင်ပါသည်။ ကမ္ဘာအေးရုံး ထဲဝင်၍ ဆရာတော်ကြီးများအား တိုက်ရိုက် မလျှောက်ထားသင့်ပါ။ မရိုသေ မလေးစားရာ၊
စော်ကားမော်ကားပြုရာ ရောက်နေပါသည်။ မိမိအပြု အမူကို အကြောင်းပြု၍ ရဟန်း၊ ရှင်၊ လူအပေါင်း အကုသိုလ်များ မတိုးပွားစေသင့်ပါ။
(ဂ) ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အမှန်တကယ် ကျင့်သုံးလိုပါလျှင် ထောက်ခံခြင်း၊ ကန့်ကွက်ခြင်း၊ ချီးကျူးခြင်း၊ ရှုတ်ချခြင်းတို့ကို လွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးရမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်များ၌ သမ္မတလည်း အဝေဖန်ခံရပါသည်။ တရားစွဲခံရပါသည်။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးလည်း အဝေဖန်ခံရပါသည်။ တရားစွဲခံရပါသည်။ အဝေဖန်မခံနိုင်၊ တရားစွဲမခံနိုင်လျှင် ကုလားထိုင်ပေါ်မထိုင်သင့်ပါ။
ယခုကိစ္စ၌ ဦးဂမ္ဘီရ၏ ကန့်ကွက်ရှုတ်ချမှုကို မခံမရပ်ဖြစ်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုက ဦးဂမ္ဘီရကို ဖမ်းဆီးချုပ် နှောင်လိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ထိုသို့ အကြောင်းပြနိုင်လောက်အောင် လုံလောက်သော ဆင်ခြေမရှိ သောကြောင့် ဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ်ကို အပြစ်ပုံချနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ သံဃာတော်များအနေဖြင့် တရားဝင် ရပ်တည်နိုင်သည့် ဥပဒေလမ်းကြောင်းမှ သိမ်မွေ့ငြင် သာစွာ လျှောက်လှမ်းခြင်းဖြင့် သူတစ်ပါး၏ ထောက်ကွက်မရအောင် ပြုမူဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။ သံဃာထု အပေါ် အုပ်မိုးချုပ်နှောင်ထားသော တရားမမျှတသည့် မည်သည့်ကန့်သတ်ချက် မျိုးကိုမဆို ငြိမ်းချမ်းသော နည်းဖြင့် စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ဖယ်ရှားရှင်းလင်းသင့်ပါသည်။
မေတ္တာရှေ့ထား ၊မရငြားသော်၊ ကျားနှင့်ဆိတ်မ၊ စိတြဂီဝါ၊
များစွာခိုသင်း၊ ငုံးခပင်းတို့၊ မကြွင်းကိုယ်စီ၊ ပိုက်ကိုချီသို့၊
Posted by kaung at Friday, February 24, 2012 No comments:
၄။ မင်္ဂလာပါ…..ဟီလာရီကလင်တန်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြောပြပေးနိူင်မလား? မြန်မာနိူင်ငံနဲ့ အမေရိကန်နိူင်ငံတို့ဟာ နောက်ဆိုရင် ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးရလာလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါသလား?
အမေစု ဖြေကြားချက်= အဲလိုပဲ မျှော်လင့်ပါတယ် ။ မြန်မာနိူင်ငံနဲ့အမေရိကန်နိူင်တို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ တစ်နေ့တစ်ခြား တိုးတက်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ဒါမှ အဲဒီလိုတွေ့ဆုံမှုမျိုးတွေ၊ ပြီးတော့ အခုလိုမျိုး တွေ့ဆုံမှုတွေ ပိုပြီးလုပ်လို့ရမှာ ဖြစ်နိူင်ရင် ဒီလိုဝါယာကြိုးတွေကနေ တစ်ဆင့်မဟုတ်ပဲ လူကိုယ်တိုင်ပေါ့။
၅။ မင်္ဂလာပါ…။ ကျွန်တော်မေးစရာတစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိူင်မှာ အရေးယူမှုတွေ ရုတ်သိမ်းသွားအပြီးမှာ နိူင်ရပ်ခြားရင်နှီးမြုပ်နှံမှုတွေ ဘယ်လောက်မြန်မြန် ၀င်လာကြမလဲ?
အမေစု ဖြေကြားချက်= အဲဒါက အရေးယူမှုတွေ တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ မဆိုင်ဘူး၊ ကျွန်မစီးပွားရေးသမားအတော်များများနဲ့ ပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့လိုချင်တာက ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ သင့်လျော်ဖို့အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ မြန်မာနိူင်ငံတွင်း စီးပွားရေးအခြေအနေပါ။ အရေးယူမှုတွေ ရုတ်သိမ်းပေးတာအပြင် အခြားအရေးကြီးတဲ့ အချက်အလက်တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ဥပမာ-- ရင်းနှီးမြုပ်နှံရေး ဥပဒေကောင်းတွေ၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေကို အကာအကွယ်ပေးတဲ့ ဥပဒေမျိုးတွေပေါ့။ အဲဒီတော့ အရေးယူတာတွေ ရုတ်သိမ်းပေးတာအပြင် အခြားဟာတွေလည်း အရေးပါပါသေးတယ်။
၆။ စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ နိူင်ငံရေးသမားတွေအတွက် ဘယ်စာအုပ်တွေကို ညွန်းချင်ပါသလဲ?
အမေစု ဖြေကြားချက်= အဲဒါက ဘယ်လိုနိူင်ငံရေးမျိုးကို လိုက်ချင်သလဲဆိုတာပေါ်မူတည်မယ်ထင်တယ်။
ဥပမာဆိုရင်--ကျွန်မပထမဆုံးဖတ်ဖြစ်တဲ့ နိူင်ငံရေးစာအုပ်က ၇ နှစ်ကြာတိုက်ပိတ်ပစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့သူ တစ်ယောက်အကြောင်းပါ။ တိုက်ဆိုင်တာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့။ ကျွန်မရဲ့ နိူင်ငံရေးလမ်းကြောင်းမှာ ဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေအတွက်တော့ ပြင်ဆင်ပေးသွားတာ အမှန်ပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုက မင်းလိုက်ချင်တဲ့ နိူင်ငံရေးလမ်းကြောင်းအတွက် အထောက်အကူပေးချင်မှ ပေးမှာပေါ့။ အဲဒီတော့ မင်းရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က အကြောင်း၊ ဗဟုသုတတွေမျိုးစုံ များများသိထားတာက ဘယ်နိူင်ငံရေး ဘ၀မျိုးတွေ အတွက်မဆို အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မှုပါပဲ။
Posted by kaung at Monday, January 30, 2012 No comments:
၁။ ကျွန်တော်တို့စပြီး မေးပါ့မယ်..
ဒီနှစ်ထဲမှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ တော်လှန်ရေးအဖြစ်အပျက်တွေ မြန်မာနိူင်ငံမှာ
ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်..။အန်တီလွတ်မြောက်လာတာရယ်၊ပါတီမှာ ပြန်ပါပြီးတော့ နိူင်ရေးလှုပ်ရှားလာနိူင်တာတွေရယ်ပေါ့။ အပြင်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျွန်တော်သိချင်တာက ဘယ်လိုဖြစ်လို့၊ ဘာဖြစ်လို့ အခုမှ ဗြုန်းစားကြီး လွတ်လပ်ရေးအတွက် တံခါးဖွင့်ပေးကြတာလဲ? ဘာတွေများ ၂၀၁၁ မှာ ပြောင်းလဲသွားခဲ့လို့လဲ?
အမေစု ဖြေကြားချက်= ကျွန်မအထင်တော့ ဘာဖြစ်လို့ အခုမှလဲဆိုတာထက် ကျွန်မတို့ ၂၃ နှစ်တိုင်တိုင် ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ရလဒ်လို့ မြင်ပါတယ်..။ ကျွန်မတို့ ကြိုးစားမှုတွေရဲ့ အသီးအပွင့်တွေပေါ့။ လူတွေက ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဟာ ရုတ်တရက်ကြီး ဖြစ်ကြတယ်လို့ မြင်ကြတယ်။ တကယ်က အဲလို မဟုတ်ပါဘူး ဒါတွေဟာ ပထမဆုံးပွင့်လာကြတဲ့ အသီးအပွင့်တွေပါ၊ ဒီလိုဖြစ်လာဖို့ အချိန်ယူနေတာကြာပါပြီ၊ ကျွန်မအမြင်ကတော့ စောတယ်ဆိုတာထက် နောက်ကျနေတယ်လို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်..။
၂။ မင်္ဂလာပါ….မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ အန်တီနဲ့ မြန်မာနိူင်ငံသားတွေအတွက် ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်ပါသလဲ? ဒီမိုကရေစီဟာ မြန်မာနိူင်ငံရဲ့ အနာဂတ်ကောင်းအတွက် လိုအပ်နေတဲ့ အပြောင်းအလဲဖြစ်ပါသလား? အမေစု ဖြေကြားချက်= အလွယ်ဆုံးပြောရရင် ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ကျွန်မနဲ့ကျွန်မနဲ့အတူ လှုပ်ရှားနေကြတဲ့သူတွေရဲ့ အမြင်မှာ လွတ်လပ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေးကြားမှာ ဟန်ချက်ညီထားချက်ပါ။ ကျွန်မတို့လွတ်လပ်ချင်ကြပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ လုံခြုံစိတ်ချချင်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီဟာ အဲဒီနှစ်ခုလုံးကို ရနိူင်တဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲလို့ မြင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ ဒီမိုကရေစီ လိုချင်ကြတာပါ. ကျွန်မတို့ လိုချင်တဲ့ ဘ၀မျိုးကို အာမခံပေးနိူင်လို့ပါ.။ အာမခံပေးမယ်ဆိုတာကလည်း ကျွန်မတို့ ကိုယ်တိုင်ကလည်း အဆင်သင့်စောင့်နေမယ်ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကြိုးစားသွားရမှာပါ။ ကျွန်မတို့လိုချင်တဲ့ဘ၀မျိုးကိုရအောင် ကြိုးစားသွားရမှာပါ..။ ကျွန်မတို့ လိုချင်တဲ့ ဘ၀မျိုးကိုရအောင် ကြိုးစားနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးတွေ ရလာလိမ့်မယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ ကျွန်မတို့ ကြိုးစားနေကြတာက အဲဒါပဲ ။
၃။ မင်္ဂလာပါရှင်..ကျွန်မတို့နဲ့ စကားပြောပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။ အနောက်နိူင်ငံတွေရဲ့ ထောက်ပံ့မှု ကြီးထွားလာတာနဲ့ ပက်သက်ပြီး မြန်မာအစိုရရဲ့ သဘောတူညီချက်မှာ ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာနိူင်ပါသလဲ ? မြန်မာအစိုးရရဲ့ ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းမှုတွေကို သဘောတူညီချက်ရယ်၊ နိူင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ဆက်ပြီး လွှတ်ပေးဖို့ရယ်မှာ ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာနိူင်ပါသလဲ?
အမေစု ဖြေကြားချက်= ပညာသားပါတဲ့ နိူင်ငံရပ်ခြားဆက်စပ်မှုတွေဟာ ကျွန်မတို့ကို အများကြီး အထောက်အကူပေးနိူင်ပါလိမ့်မယ်.။ ဘာလို့လဲဆိုတော့-- မြန်မာအစိုးရဟာ အမေရိကန်နိူင်ငံအပါအ၀င် အခြားနိူင်ငံတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးကောင်းရှိချင်ပါတယ်။ ကျွန်မအထင် အခုအချိန်ဟာ နိူင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းအတွက် သေချာစိစစ် ချိန်ကိုက်ပြီး ပါဝင်နိူင်ဖ၊ို့ ကျွန်မတို့ တိုးတက်မှုကို ကူညီနိူင်ဖို့ အချိန်ကောင်းပဲလို့ ထင်ပါတယ်။
Posted by kaung at Wednesday, January 18, 2012 No comments:
Posted by kaung at Monday, January 16, 2012 No comments:
2012 ဇန်န၀ါရီလ ကြည်နူးရသော ဘ၀ပုံရိပ်
၂၀၁၂ ခု၊ ဇန်န၀ါရီလ ၁၃-ရက်၊ သောကြာနေ့တွင် နိုင်ငံတော်မှ အကျဉ်းကျနေသူများအား လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့လေသည်။ လွတ်မြောက်လာသူများထဲတွင်
သောင်းသောင်းဖြဖြ ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုနေကြသော ပုံရိပ်တစ်စိတ်တစ်ဒေသ
Posted by kaung at Sunday, January 15, 2012 No comments: